စက်မှုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် Loading အထိုင် Shelter China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:တံခါးကိုအထိုင်,စက်မှုဆိပ်ကမ်း,Loading အထိုင် Shelter
Home > ထုတ်ကုန်များ > overhead အပိုင်းတံခါး > စက်မှုဇုန်အပိုင်းတံခါး > စက်မှုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန် Loading အထိုင် Shelter
စက်မှုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ငွေကြေးဖောင်းပွစက်မှုဆိပ်ကမ်းအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Shelter Loading
1. ပြင်ပကနေအတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ပယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း, ကသာပြုပြင်အခြေအနေများအသုံးဝင်သည်။ အသုံးလျော့ရှောင်ရှားကိုလည်းစွမ်းအင်ချွေတာရေး, ဂေဟစနစ်အကာအကွယ်, အကုန်စည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပိုမိုအလုပ်လုပ်ထိရောက်မှုကိုဆိုလိုသည်။
2. အထိုင်အမိုးအကာအပြင်ဘက်အအေးအခြေအနေများ, ပြင်ပမှာအပူကနေမျြးစိမျ့စိမျ့သောသူတို့ကိုမများနှင့်မိုးရွာရွာ, လေတိုက်, ဆီးနှင်း, မြေမှုန့်ထဲကနေအားလုံးထံမှပြည်တွင်းရေးအပူပတ်ဝန်းကျင်မှာကာကွယ်ပေးသည်။
3. ခိုင်ခံ့နှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, မတူညီသောမော်ဒယ်များကတော့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်း, မော်တော်ယာဉ်များ၏ docking မှခုခံတွန်းလှန်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်: အလေဖြတ် (စံပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်အထိုင်အမိုးအကာ) ကိုစုပ်ယူမှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းအဆောက်အဦများနှင့်အတူနိုင်ပါ, polyurethane stuffing (ခေါငျးအုံးအမိုးအကာ) နဲ့
၎င်း၏အမြင့်ဆုံး insulator တွင်လည်းအချက်ငှါ, ခေါငျးအုံးအထိုင်အမိုးအကာထိန်းချုပ်ထားအပူချိန်များအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါကူယာဉ်ဖိအားထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဿုံယာဉ် box ရဲ့ဖွင့်လှစ်နောက်ဘက်တံခါးများနှင့်နှစ်ဖက်ကြား space အပါအဝင်သုံးနှစ်ဖက်, ပိတျထားသောနေကြသည်။ ဒါဟာ insulator တွင်လည်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကွာဟချက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့သင့်လျော်သည်။ စက်ရုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်အပူချိန်ပြင်ပနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အခါဤသည်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အအေးသို့မဟုတ်အေးစက်နေတဲ့အစားအစာ၏လက်အပူချိန်ကိုကွင်းဆက်အပေါ်မြင့်မားသောတောင်းဆိုချက်များကိုတတ်၏။ ငွေဖောင်းပွမှုအထိုင်အမိုးအကာအတွက်တင်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအပူချိန်ထိန်းချုပ်ဝုဏ်၏အကောင်းဆုံးတံဆိပ်ခတ်ပေးသည်။ အထိုင်အမိုးအကာ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း, ယာဉ်အမိုးအကာဆီသို့တွန်းမထားဘူး။ အစားအမိုးအကာပြည့်စုံတံဆိပ်ခတ်ပေးခြင်း, ဆိုက်ကပ်မော်တော်ယာဉ်န်းကျင်ဖောင်းနေသည်။ ငွေဖောင်းပွမှုအမိုးအကာအားလုံးမော်တော်ယာဉ်အရွယ်အစားအဘို့သင့်လျော်သည်နှင့်၎င်းတို့၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းရည်ဝေးနေဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အော်ပရေတာများကလိုအပ်သောစံကိုကျော်လွန်နေပါသည်။
အော်တို overhead အပိုင်းတံခါးကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြင်ပအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တု Rolling အပိုင်းအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းကားဂိုဒေါင်တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တံခါးကိုအထိုင် စက်မှုဆိပ်ကမ်း Loading အထိုင် Shelter တံခါးအလိုအလျောက် တံခါး Plan ကိုခေါက် တံခါးကို Radar အာရုံခံ တံခါးကို Up ကို Stack တံခါးကိုဇစ်ပါ